Imigangatho kunye neMigaqo-nkqubo-G YOKUTHENGA NGOKUGQIBELA
Ikhaya>Ngathi>Imigangatho kunye neMigaqo-nkqubo
Ukuqengqeleka okwomeleleyo kuhlala kuvela kwisiseko esingaphakathi esomeleleyo.
Isikhokelo sokusebenza esisebenzayo kunye nesisebenzayo sisiseko sokukhula ngokukhawuleza kwenkampani. Ukusebenza nzima kunye neenzame zabasebenzi eSunsoul kwiminyaka emininzi kungashwankathelwa kwimigangatho emihlanu edweliswe apha ngezantsi, ethe yanceda ukukhulisa ukukhula kwenkampani kwimiba eyahlukeneyo enjengophando nophuhliso, amaxabiso, izibonelelo zobambiswano, ukukhula kwabasebenzi kunye nokudibana uxanduva.
• Yandisa uKhuphiswano loMthengi
Abathengi sisitshixo sempumelelo yethu. Sabelana ngamava ethu nabathengi bethu kwaye sinikezela ngezisombululo ezibanzi kubo ukuze bafezekise iinjongo zabo ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.
Ubuchule bukhokelela kwikamva
Ukuyila izinto ezintsha ligazi lethu lobomi. Sijika ngempumelelo amaphupha kwiitekhnoloji kunye neemveliso. Umda wethu wokusika bubuchule kunye namava.
• Yandisa ixabiso leNkampani
Sivelisa ukukhula okunenzuzo ukuqinisekisa impumelelo ezinzileyo ngokusebenzisa uxanduva kwipotfoliyo yethu yeshishini. Sizabalazela ukugqibelela kwaye silandele ukugqwesa.
• Lifezekise iphupha labasebenzi
Abasebenzi ababalaseleyo sisiseko sempumelelo yenkampani yethu. Inkcubeko yethu yenkampani ibonakaliswa kukuqina, ukungafihli nto kunye nokuhloniphana. Sikhuthaza abasebenzi bethu ukuba bathathe ubunini kwaye bakhule kunye nenkampani.
• Yamkela uxanduva ekuhlaleni
Sizibandakanye ekukhuthazeni inkqubo yophuhliso loluntu ngokuphucula, ukunika iingcebiso kunye neetekhnoloji ezintsha. Sizimisele ukuxabiseka kwindalo iphela, ubumi obulungekileyo benkampani kunye nokusingqongileyo okunempilo. Imfezeko ikhokela indlela esiziphatha ngayo kubasebenzi bethu, amaqabane oshishino kunye nabanini zabelo.
Umgaqo-nkqubo woMgangatho: Ukutshutshiswa ngokuGqwesileyo
• Ukunganyamezeli iZero kwiZiphene
Imisebenzi yethu ijolise kukuthintela ngokungqongqo nakuphi na ukusilela kwiimveliso nakwiinkqubo zethu. Sithathela ingqalelo iZiphene njengeyona njongo yokwenyani. Sixhasa ukuphuculwa okucwangcisiweyo kweemveliso kunye neenkqubo.
• Ukwaneliseka kwabaThengi
Imisebenzi yethu ijolise kubathengi kwaye sizibophelele ekuphuhliseni ubuhlakani obuyimpumelelo kwasekuqaleni, ukusuka ekusebenziseni iprojekthi esebenzayo kunye nolawulo lokuqhubekeka kunikezelo lwevolumu, kuwo wonke umjikelo wobomi.
Umgaqo wethu kwishishini kukuqhubeka nokuphucula ukhuphiswano lwethu. Ukuba nohlalutyo olunzulu lweengcambu zesizathu ngokusebenzisa i-PDCA kunye nezixhobo ezisemgangathweni zeSigma ezintandathu, ukuphuculwa okukhawulezayo kunye nocwangciso kwimveliso nakwinkqubo, ezona ndlela zibalaseleyo zokwabelana kunye nezinto ezintsha sisiseko sokwanda komgangatho kunye nemveliso.
• Umoya woShishino, ukuXhotyiswa kunye nokuzibandakanya
• Sikhuthaza umoya wokushishina, ukuxhotyiswa nokubandakanyeka kwabasebenzi bethu ngokuthi gqolo ngokuphuhlisa nangokusebenzisa ulwazi lwabo, amava nezakhono.
• UMgaqo-nkqubo wokusiNgqongileyo, weMpilo noKhuseleko eMsebenzini
• Sinoxanduva kwisithembiso esinobuhlobo kokusingqongileyo, sithobela umthetho nezinye iimfuno, kananjalo sidala indawo yokusebenzela ekhuselekileyo nenempilo yabo bonke abasebenzi ngawo onke amaxesha.
• Ukwandisa ulwazi lwabasebenzi ngokhuseleko kunye nempilo, sikhuthaza bonke abasebenzi ukuba bathathe inxaxheba kwimisebenzi enxulumene nokhuseleko nokufunda ngempilo.
• Sivavanya iimpembelelo zokusingqongileyo ezinokubakho kumanqanaba okuqala emveliso kunye nenkqubo yophuhliso. Yinjongo yethu ukuthintela okanye ukunciphisa ungcoliseko.
Sikwacutha ukungcolisa okukhoyo nokukhupha ukungcola kwinkqubo yokuvelisa, ngophuculo oluqhubekekayo ababandakanyeka kulo bonke abasebenzi.
• Ukuqinisekisa ukuba indawo yokusebenza ikhuselekile, isempilweni kwaye inokuthenjwa yinxalenye yoxanduva lwethu kwezentlalo.